Nivadika ho trano fisakafoanana gourmet lehibe indrindra eto Suède i Suède
Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Nivadika ho trano fisakafoanana gourmet lehibe indrindra eto Suède i Suède
Mba hanasongadinana ny sakafo ara-pahasalamana sy voajanahary misy eo amin'ny natiora, Sweden, miaraka amin'ny mpahandro efatra manana kintana Suède Michelin, dia manangana ny The Edible Country - trano fisakafoanana gourmet 100-tapitrisa hektara DIY. Ny trano fisakafoanana, miaraka amin'ny menio noforonina avy amin'ireo akora hita amin'ny natiora soedoà, dia maimaim-poana ary misokatra ho an'ny famandrihana.
Amin'ity hetsika vaovao eran-tany ity dia asehon'i Suède amin'izao tontolo izao ny fahitana sakafo mora sy mora azo. Ny The Edible Country dia misy menio sivy izay azon'ny mpitsidika atao ny manomana sy mahandro azy ireo - any an'ala. Izy io dia niara-noforonin'ny chef soisa manana kintana any Michelin, Titti Qvarnström, Niklas Ekstedt, Jacob Holmström ary Anton Bjuhr.
Ao anatin'ny fandraisana andraikitra dia latabatra hazo fito vita tanana no napetraka manerana ny firenena miaraka amin'ny kitapo lakozia efa vonona hampiasaina sy fitaovana mahandro. Ireo latabatra dia azo zohina eo anelanelan'ny Mey sy Septambra hatramin'ny. Ary raha feno tanteraka ny bokin'izy ireo, dia mbola azo atao ny mitsidika ny The Edible Country ary manomana lovia amin'ny toerana tianao indrindra amin'ny natiora soedoà.
“96 isan-jato tsy misy mponina i Suède nefa mora azon'ny rehetra idirana. Ny natiorantsika dia feno fangaro azo hanina ary te-hanasa an'izao tontolo izao hankafy azy ireo, ary miaraka amin'izay dia mihena ny natiora toa antsika Suède. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny menaky ny mpahandro kintana anay, ity traikefa mahandro sakafo DIY vaovao ity dia ahafahan'ny mpitsidika mitrandraka sy manova ny natiora ho sakafo gourmet, "hoy i Jennie Skogsborn Missuna, Chief Officer Officer ao Visit Sweden.
Ny sakafo tena voahodina dia nanjary sakafo isan'andro ho an'ny olona erak'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo safidy mahasalama izay heverina ho sarotra sy tsy azo idirana. Miaraka amin'ny The Edible Country, Suède dia manaporofo fa ny sakafo voajanahary sy mahasalama dia mety ho matsiro sy mora atao toy ny zavatra hafa ihany, miaraka amin'ireo akora azo zahana voajanahary.
“Ho ahy dia ny natiora soedoà no loharano nahazo aingam-panahy lehibe indrindra rehefa mahandro sakafo. Ny ora nandaniako tany anaty ala dia nivadika ho fahatsapana fa ny fandrahoan-tsakafo any ivelany, miaraka amin'ireo akora eo alohako, no ivon'ny nahandro soedoà. Ny firenena fihinana dia tandindon'ny fomba mora sy akaiky ary tsy dia mora ny sakafo, "hoy i Niklas Ekstedt.
Ny lovia eo amin'ny menio dia miovaova arakaraka ny vanim-potoana, ka ny fangaro dia azo zahana amin'ny natiora saika mandavantaona. Anisan'ireo lovia ny ron-kena miaraka amin'ny perch poached sy dibera ahitra, ary char mifoka sigara miaraka amin'ny chanterelles sy sorrel hazo. Ity sy ny maro hafa dia hita ao amin'ny The Edible Country, izay misokatra hamandrihana ankehitriny.
"Ao amin'ny Bookatable dia manampy ny fisakafoanana izahay hahita trano fisakafoanana mahafinaritra hamoronana traikefa fisakafoanana tsy hay hadinoina, noho izany dia faly tokoa izahay manampy an'io hevitra vaovao io. Mahaliana hatrany ny mahita trano fisakafoanana vaovao, fa ny fahazoana misakafo any ambanivohitra mahafinaritra any Suède ary avy eo mahandro lovia noforonin'ny chef iray kintana Michelin dia fotoana iray tsy tokony hohadinoina. Ny hany torohevitra omeko dia ny hamandrika haingana! ” hoy i Michel Cassius, CEO izay azo soratan'i Michelin.
Nilaza ny SriLankan Airlines fa tsy mety amin'izy ireo ny fiaramanidina Airbus
WestJet dia mandray ny Boeing 787 Dreamliner voalohany